Fortnite को नाम वा निक कसरी परिवर्तन गर्ने | मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | 27/11/2021 16:00 | अद्यावधिक गरियो 27/11/2021 16:07 | इन्टरनेट
फोर्टनाइटको ब्याटल रोयाल मोडमा, छविले ठूलो वजन बोक्छ। खेलाडीको शैली र पोशाक उसले र्याक गर्न सक्ने वास्तविक विजयहरूको संख्या जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर ती सबैको कुनै अर्थ छैन यदि हामीसँग मूर्ख नाम छ, जुन सबैले तपाइँको विरुद्ध खेल्दा वा तपाइँका खेलहरू हेर्दा मजाक गर्छन्। यो ती क्षणहरूमा हो जब हामी जान्नको महत्त्व बुझ्छौं Fortnite मा आफ्नो नाम कसरी परिवर्तन गर्ने।
फोर्टनाइटमा हामीलाई मनपर्ने र जसको साथ हामी सहज महसुस गर्छौं भन्ने नाम हुनु कुनै सानो कुरा होइन। र यसलाई परिवर्तन गर्नु पाप होइन। वर्षहरू बित्दै जाँदा, हाम्रो स्वाद र हाम्रो शैली परिवर्तन हुनु सामान्य छ। यसैले यो धेरै सम्भव छ कि हामीले फोर्टनाइट खेल्न थालेपछि हामीले आफैलाई दिएको निक अब त्यति रमाइलो वा उपयुक्त देखिदैन। वा कि यसले अब हामी आजको व्यक्तिलाई उही तरिकामा प्रतिबिम्बित गर्दैन।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, फोर्टनाइटमा तपाईको नाम परिवर्तन गर्ने कारणहरू धेरै भिन्न हुन सक्छन्। अब यो कसरी गर्ने हेरौं।
निस्सन्देह, हामीले मनमा राख्नु पर्छ कि यो विधिले हाम्रो प्लेस्टेशन, Xbox वा स्विच गेमरट्याग परिवर्तन गर्दैन। वास्तवमा यो हाम्रो Epic Games खातामा मात्र लागू हुनेछ। यदि हामी कन्सोलहरूमा फोर्टनाइट खेल्दा ती नामहरू छोड्न चाहन्छौं भने, उत्तम विकल्प भनेको पूर्ण एपिक खेल खातामा अपग्रेड गर्नु हो।
1 Fortnite मा हाम्रो उपनाम परिवर्तन गर्नुहोस्
1.1 Xbox मा
1.2 PS4 मा
2 Fortnite नाम सीमा
3 फोर्टनाइटमा उत्कृष्ट खेलाडीको नाम कसरी छनौट गर्ने?
4 बेनामी मोडमा Fortnite खेल्नुहोस्
Fortnite मा हाम्रो उपनाम परिवर्तन गर्नुहोस्
Fortnite मा नाम कसरी परिवर्तन गर्ने
चाहे हामी पीसी वा म्याक प्रयोग गरौं Fortnite मा हाम्रो नाम वा उपनाम परिवर्तन गर्नुहोस्, हामीले पहिले हाम्रो Epic Games खातामा नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। हामी यसलाई छिटो र सजिलै कसरी गर्ने भनेर वर्णन गर्छौं:
सबै भन्दा पहिले, हामीले वेब ब्राउजर खोल्नु पर्छ र हाम्रो एपिक खेल खातामा लग इन गर्नुहोस् (यदि हामीले पहिले नै गरेको छैन भने)।
त्यसपछि हामी जान्छौं खाता जानकारी पृष्ठ, जसमा हामी क्लिक गर्नेछौं नीलो पेन्सिल प्रतिमा हाम्रो नामको छेउमा
त्यहाँ हामी हाम्रो नयाँ नाम प्रविष्ट गर्नेछौं र पुष्टि गर्न बाकस जाँच गर्नेछौं।
अन्तमा, हामी नीलो बटनमा क्लिक गर्छौं पुष्टि गर्नुहोस्.
यो विधि Nintend स्विच को लागी Fortnite मा खेलाडी नाम परिवर्तन गर्न को लागी पनि मान्य छ।
यस कन्सोलका प्रयोगकर्ताहरूका लागि, प्रदर्शित नामहरू एपिक खेल खातामा बाँधिएका छैनन्, तर तिनीहरूको कन्सोल सेवा प्रदायकहरूमा निर्भर छन्। यस अवस्थामा, निक परिवर्तन गर्न, निम्न गर्नुहोस्:
नियन्त्रकमा, हामी तल समात्छौं Xbox बटन।
त्यसो भए हामी गर्नेछौं "प्रोफाइल र प्रणाली", जहाँ हामी अवस्थित Gamertag छनोट गर्छौं।
विकल्पमा "मेरो प्रोफाइल" हामी चयन गर्दछौं "प्रोफाइल अनुकूलित गर्नुहोस्"।
त्यसपछि ट्याबमा "नयाँ Gamertag छान्नुहोस्", हामी नयाँ Gamertag लेख्छौं जुन हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौं र यसको उपलब्धता जाँच गर्छौं। त्यो हो, हामी यो सुनिश्चित गर्नेछौं कि यो अर्को खेलाडी द्वारा प्रयोग भइरहेको छैन। यदि होइन भने, हामी हाम्रो छनौट पुष्टि गर्न सक्छौं।
Xbox जस्तै, प्लेस्टेशन4यो खेलको प्रयोगकर्ता नामको रूपमा PSN नाममा आधारित छ। यदि हामी यसलाई फोर्टनाइटमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं भने, हामीले यसको PSN नाम परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यो तपाइँ कसरी गर्नुहुन्छ:
PS4 गृह पृष्ठमा, हामी नेभिगेट गर्छौं "सेटिंग"।
मेनुमा हामीले चयन गर्छौं "लेखा प्रशासन"।
त्यसपछि हामी छनोट गर्छौं "खाता जानकारी"।
तल स्क्रोल गर्दै हामी चयन गर्छौं "प्रोफाइल"।
हामी अनलाइन आईडी छान्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् "म सहमत छु" देखा पर्ने विन्डोमा (*)।
यहाँ हामी हाम्रो नयाँ पहिचान प्रविष्ट गर्न सक्छौं। PS4 ले हामीलाई केही सुझावहरूको साथ मद्दत गर्नेछ। जब हामीले हाम्रो छनोट तय गर्छौं, हामी क्लिक गर्छौं "पुष्टि गर्नुहोस्"।
(*) यस बिन्दुमा यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण PSN खाताको नाम परिवर्तन गर्दैछौं। यसको मतलब हामीले त्यो ID मा लिङ्क गरिएको कुनै पनि अन्य खेलको रेकर्डहरू मेटाउन सक्छौं। यदि हामी यसमा सहमत छौं भने, हामी केवल "जारी राख्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
Fortnite नाम सीमा
फोर्टनाइट खेलाडीहरूले गर्न सक्छन् तिनीहरूले चाहे अनुसार तिनीहरूको प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै नियमहरू छैनन्, कुनै प्रतिबन्धहरू छैनन्। तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ कि कम्पनीले सहभागीहरूलाई लगभग असीमित सम्भावनाहरूसँग नामहरू आदानप्रदान गर्न अनुमति दिन्छ, हामीलाई पैसा खर्च नगरी। तपाईंले V-Bucks खर्च गर्नुपर्दैन, खेलको आधिकारिक मुद्रा।
जे होस्, त्यहाँ एक सीमा छ: तपाईंले फोर्टनाइटमा हरेक दिन आफ्नो नाम वा निक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न (यो पनि अत्यधिक सिफारिस गरिने छैन)। मात्र प्रत्येक दुई हप्तामा नयाँ नाम सिर्जना गर्न सकिन्छ।
यस सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै, हामीले साँच्चै सहज महसुस गर्ने र आनन्द लिने निश्चित नामहरू छनौट गर्नु उत्तम हुन्छ। घटनामा हामीले गलतीले एक टाइपोको साथ नाम प्रविष्ट गर्यौं वा हामीले सोचेको रूपमा हामीले रोजेको नाम मन पराउँदैनौं, त्यहाँ एक तरिका हो। उदाहरणका लागि, फोर्टनाइटले हामीलाई नयाँ प्रयोगकर्ता नाम सिर्जना गर्न अनुमति नदिएसम्म यसलाई केही हप्तासम्म अफलाइन मोडमा प्ले गर्न सकिन्छ।
फोर्टनाइटमा उत्कृष्ट खेलाडीको नाम कसरी छनौट गर्ने?
त्यो सही छ: फोर्टनाइट खेल्दा, उपनाम हाम्रो वास्तविक नाम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो उपनामले हामीलाई भर्चुअल संसारमा पहिचान गर्छ र हामीलाई अन्य खेलाडीहरूबाट आफूलाई छुट्याउन मद्दत गर्छ। तर सही नाम फेला पार्न एक जटिल कार्य हो जुन हामीलाई धेरै घण्टा लाग्न सक्छ। र दिनहरू पनि।
सौभाग्य देखि, त्यहाँ केहि छन् उपकरणहरू जसले हामीलाई हामी प्रत्येकको लागि आदर्श उपनाम फेला पार्न मद्दत गर्दछ। ती मध्ये एक हो convertordeletras.net, जसमा हामीले हाम्रो पहिलो र अन्तिम नामहरूमा आधारित, हाम्रो व्यक्तिगत स्वाद वा केवल अनियमित रूपमा सबै प्रकारका नामहरू बनाउन विभिन्न प्रणालीहरू फेला पार्नेछौं।
कुनै पनि अवस्थामा, "स्वीकार गर्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नु अघि, तपाईंले केहि खातामा लिनु पर्छ आधारभूत सिफारिसहरू उपनाम को बारेमा:
सबै होइन विशेष पात्रहरू Fortnite मा अनुमति छ।
कहिलेकाँही सरल सूत्र सबै भन्दा राम्रो छ। उदाहरण को लागी, हाम्रो आफ्नै नाम को अक्षरहरु संग एक anagram।
यो राम्रो छ छनोट गरिएको उपनाम उच्चारण गर्न र लेख्न सजिलो छ। याद गर्न सजिलो नाम तपाइँको शत्रुहरु को लागी धेरै उपयोगी हुनेछ, तर तपाईका सहयोगीहरु को लागी।
El संख्या को प्रयोग नराम्रो होइन, यद्यपि यो पनि धेरै सरल र अकल्पनीय स्रोत हुन सक्छ।
बेनामी मोडमा Fortnite खेल्नुहोस्
फोर्टनाइटमा अज्ञात गेम मोड कसरी सक्रिय गर्ने
हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने एउटा विकल्प अझै छ: पहिचान योग्य नाम वा उपनाम बिना फोर्टनाइट खेल्ने बारे कसरी? बेनामी मोड फोर्टनाइट ठ्याक्कै त्यो उद्देश्यको लागि सिर्जना गरिएको थियो - स्ट्रिमरहरू र अन्य खेलाडीहरूलाई उनीहरूको गोपनीयता सुरक्षित गर्न मद्दत गर्न। यो मोड सक्रिय गरेर, हामी हाम्रो पहिचान लुकाउन खेल्न सक्छौं। अन्य खेलाडीहरूको नजरमा, हाम्रो नाम केवल "अनाम" को रूपमा देखा पर्नेछ।
फोर्टनाइटमा हाम्रो प्रयोगकर्ता नाम लुकाउन, यी हुन् पछ्याउनको लागि चरणहरू:
पहिले तपाईंले खेलको सेटिङ मेनुमा जानुपर्छ।
त्यहाँ हामी इच्छित बेनामी मोड विकल्पहरू सक्षम गर्छौं।
हामीलाई रुचि राख्ने एउटा बटन थिचेर अन्य खेलाडीहरूबाट हाम्रो प्रयोगकर्ता नाम लुकाउनु हो।
प्रक्रियालाई उल्ट्याउन, केवल "सेटिङ्हरू" मेनुमा फर्कनुहोस् र बेनामी मोड विकल्पहरूलाई निष्क्रिय पार्नुहोस्, जसको साथ हाम्रो नाम फेरि देखिनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » फोर्टनाइटको नाम वा निक कसरी परिवर्तन गर्ने